192.168.8.1 - Nei yangu Internet ichinonoka?
Nzira dzepamusoro nhanhatu dzekutsungirira neSlow Internet Kubatana
Hapana chimwe chinhu chinogumbura pane kuve neakanakisa Wi-Fi kana Ethernet chinongedzo, zvakadaro inononoka internet kumhanya. Pazasi pane mamwe mazano ekunetsa, kugadzirisa, kungokunda inononoka internet kumhanya.
1. Tarisa yako internet hurongwa
Dzimwe nguva, yako internet yekubatanidza inononoka sezvo iwe uri kubhadhara kune yakashata internet. Pinda muwebhu webhusaiti yako uye uone kuti une hurongwa hupi. Zvino shanyira fast.com kana chero mamwe mawebhusaiti uye unoedza nekukurumidza. Nzira yakanakisa yekumhanyisa yako internet ndeye kusimudzira chirongwa chako.
2. Ipa yako hardware gadziriso yepasirese
Tarisa yako router & modem & ita nekukurumidza kumisikidza uye uone kana izvozvo zvichishanda. Wongorora mamwe maPC ari mumba mako kuti uone kana yavo Indaneti inononoka. Kana iyo nyaya ichingoitika muPC imwe chete, nyaya ndeyekuti PC, kwete modem yako kana router.
3. Gadzirisa zviratidzo zvako zveWi-Fi
Kutaura kweWi-Fi, unogona kuona kuti yako internet & router zvakanaka; zvakadaro zviratidzo zvako zvisina waya zvakaneta. Izvi zvinogona kuburitsa yapfuura-inononoka - kana, pakaderera, chiitiko chakazadza dormancy. Ipapo, iwe ungangoda kufambisa, kubhururuka, uye kuwedzera yako router neimwe nzira.
4. Bvisa kana kudzora bandwidth-hogging maapp
Kana iyo Hardware ichiita kunge iri mukushanda, tarisa kana paine mamwe mapurogiramu ari kutonga kubatana. Semuenzaniso, kana iwe ukadzora mafaera neBitTorrent, zvakajairika kubhurawuza webhu kunononoka. Iwe unofanirwa kunyange kuyedza kuisa ekuwedzera akadai seYakavanzika Badger & AdBlock Plus iyo ichavharira mashoma eiyo bandwidth-inotonga kushambadzira, mavhidhiyo & maficha, ayo anogona kupedza kubatana kwako.
5. Shandisa yazvino DNS server
Paunenge uchinyora kero mubrowser, PC yako inoshandisa imwe inozivikanwa seDNS kutsvaga & kuturikira iyo kuita PC-inopindura IP kero. Dzimwe nguva, kunyangwe, maseva ako anoshandiswa nePC kutsvaga iyo info inogona kuve nenyaya, kana kunyatsoenda pasi. Neraki, iwe une akawanda anokurumidza, emahara sarudzo dzekushandisa, senge Cloud flare kana Google DNS.
4. Bata wako internet mutengesi
Kana iwe uchinge waita matanho akakosha ekugadzirisa matambudziko & internet yako ichiri kunonoka, saka inguva yekubata yako internet mutengesi & utarise kana dambudziko rave kumagumo. Ongorora: usangofungidzira kuti vakaita chero chinhu chisiri icho uye nekurapa yako mutengi sevhisi rep maererano. Iwe unozowana chaizvo mhedzisiro chaiyo kunyanya kana vanga vachikupa kukurumidza kusiri iko panguva iyi.
5. Kuvandudza webhu kuitira kushamwaridzana kunononoka
Kugadziriswa kwekunonoka internet kunogona kutora nguva, uye munguva pfupi iwe uchiri kuda kubhurawuza. Kana kuti pamwe iwe uri pane cafe kana nendege, uye hapana chaunogona kuita pane inononoka kumhanya. Saka saka, inguva yekusimudzira dandemutande rako kunonoka kubatana.
6. Shanda zvine hungwaru
Kana iwe uchifanira kuwana basa rakapedzwa pane inononoka kubatana, ungangoda kusarudza mabasa zvakasiyana pane kana iyo internet yaive superfast. Govanisa mabasa ako kuita bandwidth-mwenje pamwe nebandwidth-inorema. Paunenge uri pane inononoka kubatana tora iwo akareruka kuti aite & unganidza ese bandwidth-anorema mabasa pamwe chete kuti iwe ugone kuzviita iwe kana iwe wawana nekukurumidza kubatana.
Dzorerazve yako Router kune Default Zvirongwa